Thwebula Evernote 7.1.4 isizulu – Android – Vessoft
Evernote – a software ukudala amanothi ezahlukene noma izinhlu zemisebenzi. Isofthiwe ikuvumela ukuba ugcine umbhalo, amanothi ngesandla noma izwi bese wengeza izithombe, lwezikhathi noma isimemezelo ezahlukene kubo. Evernote kwenza ukuthumela inothi adalwe ikheli e-mail futhi ukuxhumana nola in chat exhunywe amanothi. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa ngokuzenzekelayo amarekhodi kusukela server enikeza ukufinyelela ukwaziswa okugcinwe kusukela Amadivayisi ahlukahlukene. Evernote iqukethe eziningi amathuluzi ukuze wenze software for izidingo umsebenzisi.
Lakha amarekhodi kanye zemisebenzi
Lakha amanothi abhalwe ngesandla futhi izwi
Ikhono ukufinyelela jikelele
Ithumela amarekhodi by e-mail
Ukuvumelanisa Automatic kwamarekhodi